Diiwaanada Dukumentiyada - Liiska Faylka Fudud
Halkani waa meesha loogu talagalay tilmaamaha Faylasha Liiska ee Fudud iyo qalabka taageerada.
Liiska Faylka Maamulka, oo ku yaal dhabarka dambe ee bartaada, wuxuu u adeegaa meesha ugu weyn ee lagu maareeyo faylashaada iyo liistooyinkaaga. Halkan waxaad ku dari kartaa, wax ka beddeli kartaa oo ka tirtiri kartaa wax kasta oo ku jira liiska. Adeegso Baarka Shaqada dusha sare si aad u abuurto faylal cusub oo aad wax uga beddesho waxyaabaha ku jira liiska. Faylasha Soo rar Halkan guji… Akhri wax dheeraad ah
Categories Warqadaha 2 Comments
Bilaabida Dulmar guud ee talaabooyinka si loo helo Maamulaha Helitaanka Faylka oo shaqeynaya. 1) Firfircoon Maareeyaha Helitaanka Faylka Hubi in furaha Fudud ee Faylka Fudud ee ugu muhiimsan uu firfircoon yahay, ka dibna dhaqaajiso fiilada kordhinta Maareeyaha Fursada Tag liiska faylasha liiska Liiska. 2) Xulo Qaabka Waxaad arki doontaa wadahadalkan ku weydiinaya… Akhri wax dheeraad ah
Categories Warqadaha 6 Comments
Waxaa laga yaabaa 16, 2021 January 2, 2020 by Mitch
U dir Ogeysiis U dir ogeysiis emayl marka feyl la soo gelinayo dhinaca hore ee websaydhka. Ogeysiis Email U dir emayl halkan markasta oo fayl la soo rogo. Ku kala saar cinwaanno badan jajab. Nuqul ku dir Email Nuqul ogeysiis ah cinwaannada cinwaanadan. Ku kala saar cinwaanno badan jajab. Nuqul Indhoole ah u soo dir Email nuqul Blind… Akhri wax dheeraad ah
Noocyada Raadinta & Pagination
Kani waa CSS-da caadiga ah. Nuqul-iyo-dhaji qaybaha aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho mawduuca websaydhkaaga, ka dibna u hagaaji sida loogu baahan yahay. LIISKA FAYLKA HALKAN
Categories Warqadaha Leave a comment
Sida Loo Sameeyo Liiska iyo Muuqaalka Soo Bixiyaha
Liiska Faylasha Fudud ayaa loola jeedaa in lagu qaato mawduuca shabakaddaada sida caadiga ah. Iyadoo aan wax laga beddelin qaabka, waa inay u muuqataa mid lagu soo bandhigi karo boggaaga internetka ee WordPress. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad hagaajiso muuqaalka waxaad isticmaali kartaa xoogaa CSS fudud.
Categories Warqadaha 11 Comments
Waxaa laga yaabaa 16, 2021 April 24, 2019 by Mitch
Tilmaanta mid kasta oo ka mid ah dejimaha xakameynaya sida faylka geliyaha u shaqeynayo.
Categories Warqadaha 21 Comments
Tilmaanta mid kasta oo ka mid ah goobaha xakameynaya sida liiska faylka loo soo bandhigi karo.
Categories Warqadaha 40 Comments
August 24, 2021 April 24, 2019 by Mitch
Tilmaanta sida loo istcimaalo koodh-garaynta si loogu dhigo liistada faylka boostada, bogga ama widget-ka.
Categories Warqadaha 50 Comments